ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: July 2012
ရေးသားသူ juno at Sunday, July 29, 20123comments:
အကောင်းဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
အမြဲတမ်း ဒွန်တွဲနေတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင် က မကောင်းဘူးတဲ့။
ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်တယ် ဆိုရင်
ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်တယ် ဆိုတာပဲလေ။
ကိုယ်ကရော ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ
ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် ကောင်းခဲ့သလဲ
ပတ်ဝန်းကျင် ကရော မိမိအပေါ်
အဲဒီအချိန် အဲဒီကာလ ရောက်ရင်
ကောင်းသည် ဖြစ်စေ ဆိုးသည် ဖြစ်စေ
ကိုယ်ကိုယ် တိုင် ကတော့
အကောင်းဆုံး ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပါစေ။
ရေးသားသူ poemflower at Friday, July 27, 2012 1 comment:
ဆုံးရှုံးသွားရ လေလေပဲ မဟုတ်လား
ကြိုးစား ရုန်းကန် နိုင်ကာမှ လူစွမ်းကေကာငး
မှီခိုလိုတဲ့ စိတ်၊ အားငယ်စိတ်၊
အချောင်ခို၊ ပျင်းရိတဲ့ စိတ်တွေ မရှိဘဲ
ရဲရဲ ၀ံ့ဝံ့ ကျော်ဖြတ်သွားစမ်းပါ။
ဖေဖေ အားတက် ဂုဏ်ယူစမ်းပါရစေ။
ရေးသားသူ juno at Thursday, July 26, 2012 No comments:
စနစ်တကျ နေထိုင်စားသောက်တာ ဖြစ်ဖို့အတွက် အောက်ပါ အခြေခံအကျဆုံး အလေ့အကျင့် (၁၀) ခုကို. . အသုံးပြုပြီးနေထိုင် စားသောက်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ် မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ စောစောအိပ်ပြီးစောစောထပါ။ အချိန်ဇယား ရေးဆွဲသတ်မှတ်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။
၂။ နံနက်၊ နေ့လည်၊ ညစာများကို အချိန်မှန် စားသောက်ပါ။
၃။ အချိန်မှန် ၀မ်းသွားပါ ၊ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်များကို အောင့်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
၄။ တစ်ရက်တွင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မိနစ် ၂၀ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
၅။ နံနက်အိပ်ရာထထခငြ်း ရေ အနည်းဆုံး ၂၀၀ စီစီ သောက်ပါ ။ ကိုယ်နှင့်မကွာ သောက်ရေ ဆောင်ထားပြီး မကြာမကြာ သောက်ပေးပါ။ ရေငတ်၊ ရေဆာချိန်ထိ မစောင့်ပါနှင့်။
၆။ နေ့စဉ် ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် ထိုင်နိုင်တဲ့ အချိန်လေးရအောင် ကြိုးစားပါ။ မအားတဲ့ကြားက နားတတ်အောင် လုပ်ပါ။ စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။
၇။ အသားနည်းနည်းသာစားပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် သစ်သီးများများစားပါ။ တစ်ရက်မှာ သက်သက်လွတ် တစ်နပ်စားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၈။ နေ့လည်စာ စားပြီးနောက်မှာ နာရီဝက်လောက်အိပ်ပါ။
၉။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်ရန် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရက်မကြာမကြာ ချိန်ချိန်ကြည့်ပါ။
၁၀။ ဆေးဝါးများ မှ ဆိုးကျိုး မခံရအောင် ဆေးဝါးများကို အရမ်းဝယ်ယူ သုံစွဲခြင်း မပြုပါနှင့်။
ရေးသားသူ juno at Tuesday, July 24, 2012 1 comment:
ဘယ်သူမျှ ပျော်ရွှင်မှုကို ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
လူတွေရဲ့ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲမှာ
လူကို ပိုပြီးတော့ ငြီးငွေ့စေပါတယ်။
လူကို ပိုပြီး အထီးကျန်စေပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာကြံပြီး ယူရပါတယ်။
ရှာကြံပြီး ပျော်ရွှင်မှုကို ယူတယ် ဆိုလို့
ပျော်ရွှင်မှုကို တခြားမှာ သွားရှာစရာမလိုပါဘူး။
မိမိတို့ နေ့စဉ် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်
မိမိတို့ နေ့စဉ် သွားနေတဲံ လမ်းကြောင်း
အဲဒီ ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲမှာပဲ စိတ်အေးချမ်းမှုကို ရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ပူလောင်မှု မရှိတဲ့ စိတ်ကိုခေါ်တာပါ။
စိတ်အေးချမ်းသာစွာဖြင့် လုပ်ရင် ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Anonymous at Friday, July 06, 20126comments:
လူငယ်တစ်ယောက် မကျေမနပ် "တောက်" ခေါက်ပါတယ်။
သူက စိတ်တိုနေပေမယ့် ကျွန်တော့ကို ရှင်းတော့ပြပါတယ်။
သူ့သူငယ်ချင်းက အလုပ်တစ်ခုမှာ သူ့ကို ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ အကြောင်း ၊ သူ့ရှေ့မှာတော့ ပြုံးပြုံး၊ ပြုံးပြုံးနဲ့ နောက်ကျောကနေ ဓားနဲ့ ထိုးတတ်တဲ့ အကြောင်း၊ လူကြီးရှေ့မှာ မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်လိုလုပ်ပြပြီး ကွယ်ရာမှာ "ကြွက်သူခိုး" ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မဆုံးနိုင်တော့ပါဘူး ပြောနေတာ။
ကျွန်တော် ။ ။ "ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ"
လူငယ် ။ ။ "ဟာ ဘယ်ဖြစ်မလဲ၊ သူ့ကို လက်စားချေရမှ ဖြစ်မယ်။ "
ကျွန်တော်။ ။ "မလုပ်ပါနဲ့ကွာ."
လူငယ် ။ ။ "မရဘူးဗျာ"
ကျွန်တော်။ ။ " အပြစ်ရှိသူတိုင်းကို ခံရသူတိုင်းက အပြစ်လိုက်ပေးနေမယ်ဆိုရင် ငရဲပြည်နဲ့ ငရဲမင်းဆိုတာတောင် ဘယ်လိုအပ်တော့မှာလဲ. . "
"သူတို့ အလုပ်ရှိအောင် မင်းကို ခွင့်လွှတ်ခိုင်းတာပါ။
စဉ်းစားကြည့်ပါကွာ။ အပြစ်ပေးဖို့က ငါတို့အလုပ်မှ မဟုတ်တာ။"
ကျွန်တော့စကား မဆုံးသေးပေမယ့် ကောင်ကလေး ကတော့ သဘောပေါက်သွားပြီ ထင်ပါတယ်. . . ရှေ့ခရီး ဆက်ဖို့ပဲ ဟန်ပြင်နေပါတော့တယ်. .
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, July 05, 2012 No comments: